Ubani ongeke uthi, kodwa amadoda abathanda ukuthola izipho, akukho esingaphansi abesifazane. yabajabulisa ngokukhethekile ukuba awatshele izipho esenziwa ngoFebhuwari 23 - Suku wasemuva we lawobaba. Izipho, ezikhethwe ngokucophelela futhi kahle zahlanganiswa, yenza indoda ngijabule ngempela. Nokho, uma isimanga ngalesi kungaba prepodnesonnym ewusizo futhi ukusebenza nge uthando nasekufakazeni incazelo, sokujabulisa ivoti lakho ngeke imingcele.
Cabanga nje, ngo-February 23 - usuku lokuqala sina emva kwemaholide. Usuku luka-Valentine awubalwa. Okokuqala, newfangled mkhuba Izikhathi zokubonisana uthando njengendoda amazwe aseNtshonalanga akuwona ngempela ejwayelekile kubantu nesibindi ezinzima futhi Slavic. Okwesibili, zonke lezi candy-neminsalo, izinhliziyo ne okunoshukela yabo futhi "mimishnostyu" esezisejwayele amantombazane ngaphandle ubulili namandla. Ngakho-ke, Februwari 23 - ngosuku ezibalulekile, kufanele uzilungiselele kusenesikhathi lapho abesifazane sokungafuni ukulahlekelwa isithunzi phambi obathandayo.
Sicela bayakhohlwa amazwana ahlukahlukene: insipho, ukushefa ikhithi, othayi, Cologne futhi amabhande. Njengoba kwamasokisi kanye izingubo zangaphansi, yokuwuthola emashalofini nalezi izimpahla umgwaqo yeshumi. Yiqiniso, lezi zinto zibalulekile ekuphileni kwansuku zonke, kodwa uzivumele unika abakhethiweyo ukunakekela yakho umama. Wena zama ukuba ezingalindelekile. Mangaza indoda yakho, kholwa kimi, kunjani. Ngaphezu kwalokho, izipho ezinhle ngoSuku wobaba elimelela abaswelayo - isiqinisekiso esihle isipho ngoMashi 8, okuyinto engekude.
Izipho isitayela zokuzilibazisa
Yini udinga ukukhumbula kwasekuqaleni? Umdlali wasemuva we lawobaba, ngaphakathi spite of imisipha, toned umzimba, isibindi namandla, luhlala an kid elivamile inhliziyo. Khumbula kaningi kangakanani wena eshukunyiswa ke, inkanuko ezinye bangempela wayedlala uhlanga kwikhompyutha noma ngokuthenga indodana indiza alo, wahlala amahora phezu izingxenye eziningi nezinhlayiyana, ukuzama ukuqoqa umakhi. Ngakho ukhululeke ukulinika indoda disc nge umdlalo omusha noma ithrekhi imoto ngezimoto emsakazweni - isipho ukuthi njalo onjengaye, nokho perepadet ingane.
Ngokuvamile, amadoda suka Suku wobaba Abavikeli. imibono Holiday isipho ebizela othile bebodwa. Ngakho-ke, uma kuyintando Februwari 23, kunengqondo ukuthi owayekhethwe uyofuna uphumule. Kwenze yokugeza efana, ngisho wathonyelwa abangane bakhe ukuya khona, futhi bathumela amadoda - ndawonye ukugubha kumnandi. A option enhle kungaba ukubhaliswa massage, ikakhulukazi uma kuyinto engavamile: Thai noma ushokoledi. Futhi okwamanje ukukhulula umnumzana nabangani okwesikhathi ubhiya nice pub Irish. Zothando kusihlwa - ngokuphelele hhayi ukuthi umuntu ufuna endaweni suku olwaba olubaluleke kakhulu.
Kuyinto cishe wonke umuntu. Kulokhu, kufanele ukhethe kuphela lokho kuyoba esisebenzayo ekilasini yayo. Ngokwesibonelo, uma umnumzana - i umdobi iyakuthanda ukufunda, wamthenga induku entsha okudoba noma ukuphotha, ubhaka for igiya noma angangenwa manzi shin amabhuzu. Hunter azokuthanda imvunulo okhakhi, umgibeli - amathayi amasha, abaqoqi - zemali noma izitembu, kuye ngokuthi yini iqoqa. Kuyinto ukuthi amadoda unesithakazelo amamodeli we imikhumbi, izindiza noma izimoto. Kulokhu, lo ekahle kungaba ikhophi eziyingqayizivele prezent ukuqoqa noma njengoba amathuluzi ukudala izinto ezintsha: compressor, upende ibhokisi, amathambo, Airbrush.
Izipho uSuku wasemuva we lula wobaba eyolanda i yokuphila asebenzayo. Bathanda etendeni entsha, esikhwameni ilele, lokwela ukusonga, flashlight, ifakwe ukushaja solar yefoni, imbazo, ngembazo noma iqoqo namanenekazi sika: embizeni nge yinqwaba. Ingabe ungamangali, kodwa ezinye nabobulili sterner uthande ukufunda, ngakho-edition Deluxe we umbhali ozithandayo - yilokho okudingayo.
Izipho for amadoda uSuku wasemuva we lawobaba kufanele agcizelele injongo yayo ngqo - ukuba yiqhawe, yokuphumula nokuthula umgcini kuleli zwe. Ngakho ungakwazi bayiphe okuthile ngesitayela umkhosi: ummese alo, ofaka umnqwazo itilosi noma ijazi lesosha. Ungathenga pads ehlombe ukuze umdlali webhola lombhoxo, ethi sizolandela uthanda ngodonga lwamatshe, futhi njalo kudingeka ukuba lwesekelwe. T-shirt, umcamelo noma inkomishi nesithombe sakho ozithandayo futhi amagama "Wena wasemuva yethu okuthembekile" - isipho ezithakazelisayo, latawusebentisana cishe njalo wobulili sterner.
Uma abanye yakho abalulekile namanje Mod, ukwethula Bolero amadoda yakhe - ngokuvamile ukugqoka Matadors. Okungahambi kahle kanye nesigqoko sokuzivikela, nangesigqoko, budenovka, Sombrero isigqoko noma abafana - yasekuqaleni futhi eyindoda. Ungathenga bese yinto encane stylish lesikhumba izimpahla, lapho anhlobonhlobo izipho abobulili namandla: Cases omakhalekhukhwini, wallets, borsetki, ihlanganisa for laptops. Abashayeli uzobe ajabulela amakholomu enamandla elingaphakathi noma izesekeli amahle ezinezihloko.
Ungakwazi enta taba. Futhi ukwenza okuthile ngezandla zakho siqu. Ngokwesibonelo, nendondo ngenxa kokufaneleka okukhethekile. Kwenze ngokuphelele real kusuka kunoma iyiphi izinto edayisa izinsimbi: izinkuni, igwebu, plastic. Hlobisa indondo, trailer ngezinto ezingelutho yakhe ethokoza: kudabuke umhlane, ubuhlalu futhi sequins. Futhi siqiniseke ukuba amyise ekhaya othi: ". Ukuze anqobe ekulweni kwaneliswa nezifiso abesifazane" "iduna eziqine" noma Ngelilodwa nje, ujike emaphusheni. Uma wenza amavila kakhulu noma izandla ayibi endaweni, ungakwazi oda indondo ezivela kochwepheshe. Manje ziningi izinkampani ukuthi ngokukhethekile womshini ukukhiqizwa ezihlukahlukene zezinto zezikhumbuzo.
Izipho for Day Motherland wasemuva kungelona njalo kufanele hlakanipha ezibizayo. value njengamanje akuwona ngqo wakhona imizwa yakho ejulile. Ngakho-ke, esikhundleni zokuchitha amanani ezinto ezisemkhathini lemali, iya esitolo yezingane futhi uthenge ambalwa amanzi amavolovolo umnumzana. Noma kwaqhuma amanzi kangcono. Uma ngabe ukhethe umuzwa omkhulu namancoko, kwaba ngobuhlanya samanje kakhulu. Ngaphezu kwalokho, wonke amadoda - izingane ... Ngicabanga oyikhumbulayo ngayo.
Ukukhetha imodi samanje zokuphila futhi uhlamvu
Amadoda afana abavukuzi yangempela bachitha isikhathi esiningi emsebenzini. Uma une nje umnumzana enjalo ke bayiphe okuthile okuhlobene yokuphila ibhizinisi. Ngokwesibonelo, izikopelo mahle suit zakudala noma isiqeshana uthayi lapho uzolinikela umfanekiso nokuqina. Isikhumba ifolda amaphepha ne zamagama umnumzana bayamangala, isipho esinjalo, engazange alindele. Uma izimali uvumele, ukuthenga amahora wakhethwa. Bathi amadoda abe buthaka kule-accessory ye.
Izipho kuya wasemuva we Day lawobaba for aesthetes kuyoba ukuhluka, kodwa akukho esingaphansi ezithakazelisayo. intandokazi yakho - a Foodie? Inike Cookbook: Yilowo nalowo oda kosuku olusha kuwe Ungadla. Uma kahle ababeyizazi umculo ifilimu, kwenze i-albhamu ka-yimuphi umculi iqembu autographed. Kodwa ubudala gramophone Antique amapuleti nje nimbulale on the spot - konke ukufutheka. Athlete Yethula ithikithi ukuze umdlalo webhola, uMnu "izandla osemqoka" - iqoqo amathuluzi, umphefumulo inkampani - isipho kukho ibhodlela lewayini noma nogologo isikhathi obuhle nabangani.
Izipho bahluke ngokuphelele. Ezinye baphathe incazelo, abanye bamane nje uyabukeka emehlweni. Kulesi sisekelo zonke izipho zingahlukaniswa ngezigaba ezintathu eziyinhloko:
izipho Olungokoqobo. Perfect for Umuntu othanda bonke obusebenzayo futhi ewusizo. Lokhu kungaba umshini ikhofi intandokazi, unamathele umfowabo, Ionizer ngoba imoto ngoyise esheyininikhiye nokhiye ukufuna umkhulu omdala.
Yethula imemori. Khona-ke umphefumulo wakho ayazihambela, ububanzi ukuze wemboni. Fit lonke izipho, photo ozimele, imali emabhokisini, amageyimu ebhodi kanye nokunye. Njengoba umkhuba ubonisa, bonke abantu, kungakhathaliseki ukuthi umuntu mdala nasezinkolelweni, bayojabula imicibisholo ngogesi noma chess Antique.
izipho evumelanisiwe. Banikwa lapho umndeni has a isosha Okuyınqo, ilungu lokulwa, komthetho izisebenzi. Bayokujabulela ezinhle ukuxegiselwa ngesitayela lempi, yinqwaba esiliva namatshwayo isimo, ikhekhe ngesimo amathangi noma izindiza.
Izipho ngaphezu ngoSuku wobaba elimelela abaswelayo kuyoba kukho olukhulu isipho isigamu sesibili.
Ungamangali: zonke izinhlobo amagajethi bayakwazi lula isimo futhi alethe eziningi imizwelo eyakhayo. Ngokwesibonelo, i-inkomishi abavamile. Thenga isitsha isithombe pretty funny, okuzokwenza ugcizelele ibe nezimfanelo ezinhle labakhethiwe imikhuba yakhe noma iphutha abangenacala. Ungakwazi oda iphethini thematic: uyokwenza inkomishi phezu onyathelisiwe izithombe ezikhethiwe kusukela archive umndeni, ukubingelela, izifiso kanye sokuvalelisa amazwi.
izipho Interesting Day lawobaba elimelela abaswelayo ngesinye isikhathi kunzima ukuthola. Kulokhu, uyosindisa ezihlukahlukene ehhovisi Yizinto ezincane njalo singaba usizo kabi ukuba othandekayo wakho: iqoqo izibaya stylish, ibhizinisi notebook, ikhalenda enhle, njalo njalo. Lokho okukhethayo, nakanjani ukujabulisa insizwa. Phela, wathenga khona - ngokusuka enhliziyweni futhi ngothando. Yiba nesibindi bemangele. Ungesabi ukuba izifake engozini. Believe me, ukukhetha kuyoba imizamo yakho. Futhi uma kukhona izipho zakho uyohlale kungaba mnandi futhi ezifiselekayo.
Indlela Yokwenza imvunulo Hawaiian zomuntu incendiary